Palandoken Ski Centre vonona hitsena ny mpitia Ski | RayHaber | Railway | Highway | telegrama fiara
HomeTORKIAFaritra atsinanan'i Anatolia25 ErzurumPalandöken Ski Center dia vonona handray ireo mpitia ski
07 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 25 Erzurum, Faritra atsinanan'i Anatolia, ANKAPOBENY, Headline, TORKIA, TELPHER 0
palandoken ski resort dia vonona handray ireo mpitia ski
Erzurum Palandöken Ski Center dia vonona hampiantrano mpitia ski miaraka amin'ny hotely kintana 5, trano bungalow 9 ary hantsana aviavy ary koa ny fampisehoana sy fikambanana hosokafana amin'ny vanim-potoana vaovao.
Natural Environmental Features ririnina hetsika eo amin'ny fizahan-tany Torkia ny lehibe ny faritra Ski ao amin'ny ambaratonga voalohany sy ny manana 3185 Ma tampon'isan'ny Palandöken tendrombohitra, any atsimo sy ny fehiny dia mivelatra Erzurum sy atsinanana-andrefana tari-dalana. Ny tendrombohitra Palandöken dia misy faritra 70 km eo ho eo ny halavany ary 30 km sakany. Ny haavon'ny tendrombohitra dia manomboka amin'ny 2000 m hatramin'ny 3176 m. Miaraka amin'ny 3176 m, Big Ejder Tepe, izay mamolavola ny tendrony avo indrindra any an-tendrombohitra Palandöken, ary 3095 m, Küçük Ejder Tepe dia miakatra ao atsimon'ny afovoan-tanàna Erzurum ary mankany amin'ny faritra atsimon'i Hınısboğazı.
Ny Tendrombohitra Palandöken, izay manolotra tendrombohitra antonony, dia malefaka afa-tsy ny lohasaha arovana sy ny ala fanantonana. Mandrakotra ny palitao sy ny kirihitra matetika. Vokatry ny fika avo dia nisy ny firafitry ny topografika nipoitra izay nisy ny tampon-tsofoka mipoitra tampoka miaraka amin'ireo takelaka mipoitra. Raha miakatra ambonimbony kokoa izy io, ny topografika dia miova miaraka amin'ireo lovia lehibe misy azy ary ireo voromanidina misy endrika cone.
Erzurum dia voahodidin'ny havoana tendrombohitra ary manana toetrandro mangatsiaka. Ny iray amin'ireo antony ahafahan'ny fizahan-tany ririnina maharitra Erzurum dia tsy isalasalana ny mampiavaka ny toetrany. Erzurum dia manana toetrandro izay manome fampiononana bioclimatic noho ny toerana avo ary manana fiantraikany fampitomboana fampisehoana. Ny vanim-potoana ao amin'ny foibe fizahan-tany ririnina ao Palandöken dia ny andro / taona N 150 ”ary mirakitra ny volana Desambra, Janoary, Febroary, martsa ary aprily. Amin'ny toe-piainana ririnina mahazatra dia mihoatra ny 2 m ny hatsiaka amin'ny oram-panala. Ny kalitaon'ny oram-panala dia tena zava-dehibe amin'ny hetsika ski. Raha ny zava-misy dia tokony ho latsaka amin'ny endrika kristaly kristaly ny fonon'ny oram-panala, fa tsy oram-panala na oram-panala mando, mba hamoronana loharanom-bola ho an'ny mpizahatany. Ny kalitao ao Palandöken dia avo dia avo, saingy manana kalitao miloko vovony noho ny firafitry ny vatany.
Snow kalitao no matin'ny hatsiaka ny fananana, mifehy ny ririnina fizahan-tany foibe Palandöken mahasoa toe-javatra noho ny hafa efa misy ririnina fizahan-tany foibe any Torkia. Ankoatra ny fampiasa amin'ny ranomandry kristaly, ny isan'ireo andro mipoitra hita mandritra ny taona dia isan'ireo tombony azo amin'ny fizahan-tany amin'ny fanaovana ski sy ny fanatanjahantena amin'ny ririnina any Erzurum. Mandritra izany fotoana izany, ny foiben'ny ski dia manodidina ny 20 minitra miala ny seranam-piaramanidina dia iray amin'ireo antony lehibe indrindra mahatonga ny fizahan-tany mahaliana ao Erzurum.
Ny voalohany sy ny lehibe feno tetikasa Palandöken Ski Center for ririnina fizahan-tany ao Torkia "ny Palandöken Erzurum Ririnina Fanatanjahan-tena sy Tourism Master Plan" fianarana. Tao anatin'ny fandalinana, natao dia ny Palandöken Mountains dia manana endrika mampiavaka ivontoerana fanatanjahan-tena iraisam-pirenena miaraka amin'ny firafitry ny voajanahary sy ny toetrandro masiaka. Ao anatin'ity tetikasa ity dia azo inoana fa misy olona 32 an'arivony afaka mandehandeha amin'ny faritra telo, fifaninanana iraisam-pirenena ary na dia olympika aza ny ririnina, ary olona X000 no afaka miasa mivantana.
Erzurum-Palandöken Rindranasa Fanatanjahantena Ririnina sy ny Fizahantany momba ny fizahan-tany (1991) dia namantatra faritra manan-danja ara-toeran-tsambo miisa telo ao amin'ny faritany. Ireo rehetra ireo dia eo amin'ny tampon'ny avaratra amin'ny Tendrombohitra Palandöken. Ireo tanimbary ireo; Toerana misy ny tsipika Hınıs-Palandöken, Plateau Gez ary Faritra Konaklı. 25 amin'ireto faritra ireto izay rakotry ny plan master. Raha ampidirintsika ao anatin'ilay rafitry ny Lalaon'ny Ririnina Iraisam-pirenena amin'ny fararano ririnina ny Kandilli Region dia afaka mamolavola ivontoerana fizahan-tany ririnina Erzurum ao amin'ny faritra 4 lehibe. Hınıs - Palandöken Toerana tsipika: Any amin'ny Erzurum Selrait (fantatra ihany koa amin'ny hoe Hınıs Strait sy Tekman Strait) izay atsimo atsinanan'i Erzurum sy 5 km ihany. Ity faritra ity, izay malaza amin'ny anarana hoe Resort Palandöken Ski, dia ahitana an'i Ejder Hill sy ny manodidina azy eo amin'ireo tendrombohitra Palandöken. Palandöken Ski Center dia lasa iray amin'ireo faritra fizahan-tany manan-danja indrindra ao amin'ny firenentsika miaraka amin'ireo fotodrafitrasa fisakafoanana azy, zorony lava sy midadasika, trano fandraisam-bahiny ary fitaterana mekanika izay azo ampiharina mora foana ny famaizana alpine.
Ny hetsika fanatanjahan-tena amin'ny ririnina ao amin'ny Palandöken Ski Center dia hita ao amin'ny faritra 2200-3176 misy fehikibo metatra ary atao avy any avaratra mankany atsimo any Namlıkar, Hınıs Strait, Konaklı, Ülkeroğlu ary Yağmurcuk. Palandöken dia iray amin'ireo toeram-pivarotana ski akaiky indrindra eto an-tany miaraka amin'ny halaviran'ny 5 km kilometatra mankany afovoan-tanàna Erzurum. Ara-dalàna ny 25 - 30 minitra miala ny seranam-piaramanidina Erzurum, ny trano fandraisam-bahiny.
Ny ski dia mihazakazaka ao amin'ny Palandöken Ski Resort dia anisan'ireo hazan-dranomasina lava sy lava be eto ambonin'ny tany. Ny Palandöken Ski Resort dia manana hazakazaka 27 ski misy fahasamihafana isan-karazany, ao anatin'izany ny Federasiona Iraisam-pirenena Ski (FIS) ankatoavin'ny ski, izay ahafahan'ireo mpanao skoto matihanina manao ski. Ny faritry ny sisiny lava indrindra dia 12 km ary ny halavan'ny haavon-dranomasina Ski dia 28 km. Ny fahasamihafana eo amin'ny fanombohana sy ny fiafarana avo dia 1100 metatra. Lalan'i Ejder sy Kapıkaya dia nambara ho lisitry ny lalao Olaimpika ho an'ny fifaninanana Slalom sy Great Slalom. Ny fifaninanana Slalom sy lehibe Slalom dia atao amin'ireto tehezan-java-manidina ireto, ka izany dia anisan'ireo faritra be mpitia indrindra eo amin'ireo ivon-toeram-pako.
Misy ny gadona 5 (olona 4500 / isan-jotra), ny 1 chairlift (olona 300 / ny fahafaha-mitoetra ora), ny fanabeazana zazakely 2 (ny fahafaha-manaon'ny olona 1800), ny fanaon'ny 1 gondola (ny olona 1500 / ny fahafaha-manana ora). Palandöken koa dia mikarakara fifaninanana ski sy snowboard ary festival snow eo amin'ny sokajy isan-karazany. Ankoatr'izay, misy fotodrafitrasa fizahan-tany efatra ao an-tendrombohitra, ny kintana 5 ary kintana 3 4, ary koa trano ski, trano fidiovana ary trano fisakafoanana. Ny fahafaha-manao fandriana azo alaina ao amin'ny toeram-pisakafoanana amin'ny ski dia manodidina ny 2000.
Tiorkia voalohany, ary zava-dehibe dia iray amin'ireo voalohany ririnina fizahan-tany foibe Palandöken Mountains ho toy ny vokatry ny fanadihadiana ataon'ny miankina sy tsy miankina amin'ny sehatra, tia manao ski ambony sy ny hetsika ririnina ny fizahantany toy ny iraisam-pirenena ho toerana miavaka amin'izany lalana. Etsy ankilany, hita fa ny mpizaha tany an-trano dia betsaka lavitra noho ny isan'ireo mpizahatany vahiny. Ny mombamomba ny mpanjifa ny ankamaroan'ny mpizahatany vahiny mitsidika an'i Palandöken dia mpizahatany avy any Ukraine, Russia, Iran, Azerbaijan, Georgia ary Moyen Orient. Ny 25 dia ny fananganana fantsom-pisaka maoderina tena misy ao Palandöken. Natomboka tamin'ny lalao eran-tany ririnina amin'ny Inter-University.
Konakli: atsimo andrefan'i Erzurum ary 18 km mankany afovoan-tanàna. Eo anelanelan'ny vohitra Konaklı (2200 m) sy ny tendrombohitra Kırkulak (3084 m), ny foibe ski dia mety indrindra amin'ny fifaninanana ski Alpine sy ny fifaninanana ski maimaim-poana. 25 amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny faritry ny Lalaon'ny Ririnina Iraisam-pirenena eran-tany, dia misy ny lalambe 460 mandrakotra ny velaran-tany 11 hektara voaomana ho an'ny fifehezana Alpine sy ny slalom. Na dia amina faritra samihafa amin'ny ski aza ny tany dia lafin-javatra manan-danja amin'ny Konaklı izy fa manome fotoana ahafahana mametraka fifandraisana eo amin'ireo faritra ireo.
Gez Plateau: foibe fanatanjahan-tena ririnina Gez dia ao amin'ny 2200-2770 m ary 7 km atsinanan'i Erzurum. Ny hahekeny 54 dia manana rihana telo lehibe izay miainga avy amin'ny tendrony mankany avaratra-atsinanana. Ny faritra sliding dia eo anelanelan'ny 2150 m sy 2750 m. Izy io dia mety amin'ny skiing alpine sy ny skiing maimaimpoana. Na izany aza, tsy nisy fandinihana natao tao amin'ny Gez Plateau momba ny fanatanjahan-tena amin'ny ririnina.
Kandilli: Kandilli Ski Resort, 25. Natsangana mba hanomezana fifaninanana biathlon sy ski jogging ao anatin'ny tontolon'ny lalao ririnina amin'ny World Winter-University. Kandilli Ski Resort dia miorina eo amin'ny terrain 160 ha ary ny morontsiraka dia hita ao amin'ny haavon'ny 1713-1767 m. 36 km miala amin'ny afovoan-tanàna. Away. Kandilli dia manana toeram-pivoahana ski, tampon-kavoana miaraka amin'ny haavon-tsarotra samihafa, trano fisavoana ary fantsom-bavak'i biathlon.
Map of Torkia Cableway
Nanomboka nampiala voly ireo mpandihy skiing Küpkıran 04 / 01 / 2016 Nanomboka nampiantrano ny mpitia ski Küpkıran: Centre Ski Küpkıran any Ağrı, nanomboka nampiantrano mpitia ski. Taorian'ny oram-panala (snowfall), izay mahomby alohan'ny Taom-baovao, atleta sy olom-pirenena, handany ny fialan-tsasatry ny fialantsasatra amin'ny fialantsasatra amin'ny alàlan'ny fialan-tsasatra amin'ny sabotsy Küpkıran Ski…
Ny Yildiz dia manohy mihaona amin'ireo mpandeha an-tanety amin'ny ski 22 / 02 / 2016 Mbola mitohy ny fahatongavan'ireo mpankafy Ski Mountain Ski Yildiz: na eo aza ny andro mafana any Sivas tato anatin'ny andro vitsy, ny mpitia ski dia mankafy ny ranomandry ao amin'ny Yildiz Mountain Winter Sports Tourism Center. Nandritra ny herinandro tao Sivas…
Palandöken dia miandry ireo tia ski 03 / 03 / 2016 Palandöken kayaksever miandry: Torkia nipetraka tany amin'ny vanim-potoana mafana indrindra ny taona, ka hankafy tia manao ski ambony in Palandöken in Erzurum feno mitohy amin'ny hafainganam-pandeha. Palandöken, iray amin'ireo toerana fivarotana ski manerantany, safotryin'ny mpitia ski. Ilay Zanaka mafana indrindra
Palandöken Ski Resort dia vonona ho amin'ny Krismasy 29 / 12 / 2011 Ny Ivotoerana Ski Palandöken, iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny lehibe indrindra eto an-tany, dia nahatanteraka ny fiomanana amin'ny krismasy. 25. Any Palandöken, izay nohavaozina tato anatin'ny tontolon'ny lalao ririnina amin'ny tontolon'ny ririnina eran-tany, ireo tompon'orinasa dia afaka manome ny serivisy tsara indrindra ho an'ireo vahiny.
Ny seranam-piaramanidina Palandoken dia miomana amin'ny vanim-potoana 19 / 11 / 2013 Palandöken Ski ala nenina no manomana ny vanim-potoana: Miorina eo amin'ny lehibe Ski Resorts ny vorontsiloza Palandöken Ski Center no manomana ny ho avy vanim-potoana ririnina. Xanadu Snow White miaraka amin'ny Polat Renaissance ao amin'ny tendrombohitra Palandöken ho an'ny vanim-potoana vaovao…
Nanomboka nampiala voly ireo mpandihy skiing Küpkıran
Ny Yildiz dia manohy mihaona amin'ireo mpandeha an-tanety amin'ny ski
Palandöken dia miandry ireo tia ski
Palandöken Ski Resort dia vonona ho amin'ny Krismasy
Ny toeram-pialan'ny Palandöken dia vonona amin'ny fialantsasatry ny Krismasy
Fotoam-pialan-tsasatra sy fialan-tsasatra no misokatra ao amin'ny Ski Resort Palandöken
Skiing enthusiasm amin'ny toeram-pialan-tsambo ao Palandoken
Skiing at the Ski Resort Palandoken
News Archive Safidio ny volana Novambra 2019 (248) Oktobra 2019 (608) September 2019 (557) August 2019 (509) Jolay 2019 (634) June 2019 (502) May 2019 (526) April 2019 (419) March 2019 (521) Febroary 2019 (483) Janoary 2019 (502) Range 2018 (620) Novambra 2018 (504) Oktobra 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) Jolay 2018 (506) June 2018 (581) May 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) Febroary 2018 (500) Janoary 2018 (557) Range 2017 (509) Novambra 2017 (426) Oktobra 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) Jolay 2017 (479) June 2017 (477) May 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) Febroary 2017 (477) Janoary 2017 (538) Range 2016 (487) Novambra 2016 (631) Oktobra 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) Jolay 2016 (485) June 2016 (661) May 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) Febroary 2016 (855) Janoary 2016 (751) Range 2015 (799) Novambra 2015 (640) Oktobra 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) Jolay 2015 (504) June 2015 (535) May 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) Febroary 2015 (878) Janoary 2015 (1076) Range 2014 (963) Novambra 2014 (826) Oktobra 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) Jolay 2014 (911) June 2014 (735) May 2014 (957) April 2014 (971) March 2014 (864) Febroary 2014 (720) Janoary 2014 (733) Range 2013 (664) Novambra 2013 (656) Oktobra 2013 (547) September 2013 (570) August 2013 (533) Jolay 2013 (661) June 2013 (577) May 2013 (734) April 2013 (1058) March 2013 (1101) Febroary 2013 (811) Janoary 2013 (905) Range 2012 (911) Novambra 2012 (1167) Oktobra 2012 (829) September 2012 (886) August 2012 (970) Jolay 2012 (859) June 2012 (591) May 2012 (445) April 2012 (562) March 2012 (699) Febroary 2012 (546) Janoary 2012 (417) Range 2011 (149) Novambra 2011 (35) Oktobra 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) Jolay 2011 (18) June 2011 (16) May 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) Febroary 2011 (24) Janoary 2011 (13) Range 2010 (335) Novambra 2010 (11) Oktobra 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) Jolay 2010 (9) June 2010 (19) May 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) Febroary 2010 (303) Janoary 2010 (1838) Range 2009 (4) Novambra 2009 (1) Oktobra 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) May 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) Febroary 2009 (4) Janoary 2009 (3) Novambra 2008 (1) Oktobra 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) Jolay 2008 (2) June 2008 (2) May 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) Febroary 2008 (5) Janoary 2008 (2) Range 2007 (2) Oktobra 2007 (2) Jolay 2007 (1) May 2007 (1) April 2007 (1) Febroary 2007 (2) Janoary 2007 (1) Range 2006 (1) Oktobra 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) May 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) Novambra 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) Febroary 2005 (1) Janoary 2005 (1) Range 2004 (1) Oktobra 2004 (3) Jolay 2004 (1) May 2004 (2) Range 2003 (1) Oktobra 2003 (1) May 2003 (1) March 2003 (1) Febroary 2003 (1) Janoary 2003 (1) Range 2002 (1) Oktobra 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) Janoary 2002 (2) Jolay 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) May 2000 (3) March 1999 (1) Oktobra 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) Oktobra 1996 (1) August 1996 (2) May 1995 (1) August 1992 (1) May 1990 (1)
ALD Automotive Torkia ao amin'ny fihazana nomena ny asan'ny fanahy Talen'ny Oguzhan